GNOME VIdeo Arcade, nyowani nyowani yeMAME emulator muGNOME | Linux Vakapindwa muropa
GNOME Vhidhiyo Arcade (GVA) chinongedzo cheMAME chinoshanda munzvimbo dzeGNOME desktop. Iyi nzira yakapusa yekutora maRoms ako mitambo unofarira Classics pane yako Linux. Kune avo vasingazive MAME (Multiple Arcade Machine Emulator), inova yemhando vhidhiyo mutambo emulator. Zvinoitwa ne software iyi kutevedzera michina ine dhara Hardware izvo zvatove zvakaoma kusvika uko iyo mitambo yakaita kuti hudiki hwedu hwakasiyana iurayiwe.
Yese mitambo yekare iya yakabuda kubva kuma 70s uye makumi emakore gare gare, inogona kumhanyisa paPC yako nekuda kweiyi emulator. MAMA akaonekwa kekutanga mu1997 uye akachinja kusvika nhasi. Iye zvino paGNU / Linux masisitimu ane GNOME desktop (nemamwe madhesiki isu tichafanirwa kutsvaga dzimwe nzira dzakadai seKXMAME kana KmameRun yeKDE) ino interface inogona kushandiswa kupedza maawa uchitamba.
ari mitambo yechinyakare ivo vanowanikwa mumifananidzo yeROM. A ROM iri chaizvo package ine data rehardware bhodhi remuchina uko chaiko mutambo wevhidhiyo wanga uchimhanya uyezve iyo software inoita kuti mutambo wevhidhiyo ugone. Saka isu tine zvese zvatinoda kuti emulator itangezve mamiriro akakodzera uye titendere isu kuzvivaraidza. Chii chauri kumirira kuti utambe iyo mitambo zvakare? Mario, Tetris, Dhongi Kong, Street Fighter, Mortal Combat, PacMan, Battle City, Arkanoid, ...
Mamwe mashoko - Iyo Penumbra Series vhidhiyo mutambo weLinux inowanikwa kurodha pasi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » GNOME Vhidhiyo Arcade: interface yeMAME
Tianhe-2: komputa ine simba kwazvo pasirese inoshandisa Linux